Uhlaziyo loMhlaba oqinisekileyo i-21 TB yemifanekiso- iGeofumadas
Ikhaya/Ehlabathini elungileyo/Uhlaziyo loMhlaba oqinisekileyo i-21 TB yemifanekiso
Uhlaziyo loMhlaba oqinisekileyo i-21 TB yemifanekiso
Yiloo ndlela elikhulu ngayo inani ledatha egcwaliswe nguMhlaba oGqibeleleyo kwezi ntsuku zika-Matshi, kwaye amazwe e-Hispanic okusingqongileyo awashiywanga ngaphandle; IMexico neBrazil zezona zixhamle kakhulu. Amagama abhalwe ngesiNgesi, njengoko kubhengeziwe kwi-Virtual Earth.
EMbindi naseMzantsi Melika Caribbean / North America Yurophu yaseNtshona
ICuiab kunye neVrzea Grande
Cuatrocienegas de Carranz
ISanta Maria Del Rio
Hlola ilizwe lakho, kuba ukuhlaziywa kuye kwaba ngowona mkhulu kuninzi kwiminyaka yamuva.
Guqula i-shp ukuya ku-kml ... kwaye uphelele
Namhlanje kwi-8: 30 PM
Indlela yokukhuphela imifanekiso esuka kwiGoogle Earth - iGoogle Maps - iBing - i-ArcGIS Imagery kunye neminye imithombo
I-Google Maps iphucula ukusebenza kwayo
Allallsoft, khuphela iimephu ezivela kwiGoogle, Yahoo, Bing kunye ne-OSM
Ukuhamba ngeenqwelo ezihamba ngeNovember 2007